Ny orinasa no nanao ny fitsipika zavamaniry mandroso fitaovana amin'ny milina. Manana manontolo QC resadresaka sy rafitra ary ny HPLC, GC sy ny UV spectrophotometer mba handinika sy hifehy ny kalitaon'ny ny vokatra.
Ny tena vokatra dia ahitana mpanentana cortico Oral steroid ranon-javatra, Anti-Estrogen steroids, SARMs Steroids, lahy sy vavy, firaisana ara-nofo hormonina, peptides sy steroid vovoka toy ny Trenbolone Acetate, Boldenone Undecylenate, Drostanolone Propionate, Nandrolone Decanoate, Methenolone Enanthate, testosterone Enanthate, testosterone Cypionate, Tetracaine, Linocaine, Benzocaine, MT-1 sy ny sisa.
Tamin'ny alalan'ny fikarohana sy ny fahalalana ny steroid anabolic powders, isika manome mpanamboatra sy azo antoka kokoa, tsara kokoa-fanatanterahana sy ambony kalitao steroids-hihaona amin'ny ilain'ny izao tontolo izao tsy mitsaha-mitombo. Efa nanangana mafy fiaraha-miasa amin'ny mpitarika maro simika sy ny fanafody orinasa ao Shina. Ny raharaham-barotra miparitaka ny saha maro anisan'izany ny fanaovana fanatanjahan-tena an-tsaha, toeram-pitsaboana, fikambanana, orinasa fanafody sy ny sisa. Manantena izahay hametraka maharitra raharaham-barotra eran-tany fifandraisana amin'ny mpanjifa.
Address: 18F, Guanghao trano, Meilong Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Sina
Contact Olona: Ramatoa Cathy
18F, Guanghao trano, Meilong Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Sina